Kuwedzeredzwa kwejecha kunogadzira kukanganisa kwezvakatipoteredza uye zvematongerwo enyika | Green Renewables
Kuwedzeredzwa kwejecha kunogadzira kukanganisa kwezvakatipoteredza uye zvematongerwo enyika
ChiGerman Portillo | | Environment
Kunyanya kushandiswa kwezviwanikwa zvakasikwa kunogadzira kwakakanganisa zvakatipoteredza uye kuhurumende dzinotarisira zviwanikwa izvi nenharaunda. Mune ino kesi, isu tiri kutaura nezvazvo kunyanyisa kushandiswa kwejecha.
Jecha chinhu chinowedzera kushomeka uye chakakosha, nekuti ishoma nekuda kwenzvimbo dzakakwirira dzekukukurwa kunokonzerwa nekusanduka kwevanhu kuve gwenga. Uku kunyanya kushandisa kunoitisa, pamusoro pezve zvinokanganisa nharaunda, hupfumi, zvematongerwo enyika uye zvemagariro. Izvi zvinomanikidza matanho anofanirwa kutorwa akananga kune manejimendi manejimendi inodzora mashandisiro ayo.
1 Kukosha kwejecha sosi
2 Kuwedzeredza kwejecha
3 Matanho ekurwisa aya mamiriro
Kukosha kwejecha sosi
Jecha rinobva kumahombekombe, nzizi uye gungwa rinoita basa rakakosha muzvinhu zvipenyu nekuda kwe iyo hombe nhamba yezvipenyu yainogara uye kudziviriro kwainoita pamahombekombe ezviitiko zvine simba zvemuchadenga, maererano nechinyorwa chiri mumagazini Sayenzi.
Vanhu vanga vachivaka nekushandura nzvimbo dzese dzechisikigo kuita madhorobha uye kugadzira maguta ekugara mukati nekuvandudza hupfumi Uku kusimudzira kwekuwedzera kwemaguta pasirese kwakaitika kumanikidza kwakasimba pane chinodiwa chejecha yekuve chinhu chakakosha uye chakakosha muindasitiri yekuvaka. Jecha rinoshandiswa kugadzira zvinhu zvakaita sekongiri, asphalt kana girazi.
Uye zvakare, jecha rinoshandiswa zvakare mukudzosera kwemahombekombe kana hydraulic kutsemura, izvo zvinoita kuti kudiwa kwayo kukure nekukasira sematambudziko ane chekuita nekushandisa kwayo
Uku kuwedzera kwekushandisa kunokanganisa zvakasikwa zvisikwa nenzira yakaipa, kubvira kusiyaniswa kwemibhedha yemurwizi nenzvimbo dzemahombekombe kwakanganiswa. Kana iyo ecosystem inogara mhuka nemiti yemarudzi inogara zvisina kunaka, inokanganisawo trophic cheni, ichipaza iyo ecological muyero. Uye zvakare, kushomeka kwejecha kune zvakashata mukugadzirwa uye kutsvaga kwekudya kwenzvimbo dzenharaunda.
Chiitiko chinoitika mune angangoita ese maguta emahombekombe kutakura jecha kubva kune rimwe bhishi kuenda kune rimwe kuti rizadze. Izvo zvivakwa zvemunhu pamhenderekedzo yegungwa, senge mabara emahombekombe, madoko, madoko, nezvimwe. Ivo vanoshandura simba rejecha uye vanokanganisa kuyerera kwenguva dzose, zvichikonzera kushomeka kwaro mune dzimwe nzvimbo dzemahombekombe. Kuti kuderedze dambudziko iri, jecha rinotorwa kubva kumahombekombe "ane vanhu" ndokudururirwa kune iro rine dhefisiti.
Nekudaro, chiitiko ichi chinogona kutungamira kupararira kwemamwe marudzi asina kunaka vanoona mukana wavo ipapo, kana vanotungamira mukuumbwa kwemvura dzakamira dzinofarira kupararira kwezvirwere zvinotapukira senge malaria.
Rimwe rematambudziko akakomba anokonzerwa nekunyanyoshandiswa kwejecha nderekuti rinoderedza huwandu hwetsvina inowanikwa mumahombekombe uye mumakungwa erwizi. Kana delta isina dutu rakakura, rinenge risingadzivirirwe pamiganhu uye shanduko yemamiriro ekunze sekukwira kwenzvimbo yegungwa kana kuwedzera kwemadutu, ayo kukuvara, kunowedzera kudiwa kwejecha.
Matanho ekurwisa aya mamiriro
Iye muongorori wenyaya iyi, Mufananidzo weAurora Torres, inonongedza kuti matanho anofanirwa kutorwa kunzvenga iyi mamiriro azvino ekushandisa zvakanyanya kweichi chidiki uye chakakosha sosi.
“Zvakakosha kuti hurumende dzibatsirane muno nekunze mukutungamira kwadzo. Masayendisiti anobva kwakasiyana siyana anofanirwa kushanda kubva pakuona kwakarongeka kuitira kuti vagadziri vemitemo nenharaunda vazive kukura kwedambudziko iri uye zvarinoreva”Anodaro Torres.
Chekupedzisira, anosimbisa kuti zvakafanira kukurudzira kudzokorodza kwekuvaka nekuparadza zvinhu, nekuti ivo vanogadzira mamirioni ematani pagore uye vanogona kusevha mitengo kana ikashandiswazve, pamusoro pekusatora nzvimbo munzvimbo dzekurasa marara. Zvakanakira kuburitsa jecha zvinogona kutungamira mukumuka kwemakakatanwa ezvematongerwo enyika, dzimwe nguva mhirizhonga, senge kutaridzika kwejecha mafia kana kunetsana pakati penyika dzakavakidzana nekuda kwekutengesa nekutora zvisiri pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kuwedzeredzwa kwejecha kunogadzira kukanganisa kwezvakatipoteredza uye zvematongerwo enyika
Iko kushanduka kwe biomass muSpain